Spare zvikamu zveApple Watch mumusika weChina | Ndinobva mac
Spare zvikamu zveApple Watch mumusika weChina
Kana iwe waifunga kuti musika wezvipenga zveiyo iPhone, iPad kana Mac ndiwo chete, wakakanganisa uye ndezvekuti mumusika weChinese zvese zvinogoneka uye mikana yacho mazana ezviuru iyo iwe yaunogona kuwana pamambure kana iwe uchida kugadzirisa kuputsa kwechimwe chikamu cheako Apple chishandiso.
Nezvo isu hatidi kukuudza kuti ndiyo yakanyanya kukurudzirwa, asi isu hatigone kukuudza iwe kuti kune vamwe vanhu ndizvo kana kwete chinhu chakanakisa chavanogona kuita mushure mekunge vakuvadza chimwe chikamu chechigadzirwa. Mune ino kesi tauya pamambure pamwe nekutsiva kwechidzitiro cheApple Watch Series 1.
Sezvo iwe ungatoziva kare, sekune iyo iPad, iPod uye nezvimwe zvakawanda zvigadzirwa zveapuro, zvinowirirana zvigadzirwa zvacho zvinhu zvakanamira zvakanyanya uye nekudaro zvinonyanya kuoma kugadzirisa. Nekudaro, isu tinogona kuwana technical services mumaguta ese. zvisina kukodzera izvo zvinogona kukuburitsa mukukurumidza uye kukutorera zvisiri-zvepakutanga zvikamu zvekuchengetedza. Iwe unofanirwa kuziva kuti nekuita izvi zvinhu iwe unorasikirwa neApple warandi, asi pane nguva dzekuti kumunhu hazvina kukodzera kuendesa kune yepamutemo technical service nekuti Apple haina kana kuchinja izvo zvakaputswa Panzvimbo iyoyo, vanoitsiva neyuniti nyowani yemutengo wakakwirira zvakanyanya kupfuura wekutsiva.
Mune ino kesi, izvo zvatinokuratidza iwe kutsiva kwechidzitiro cheiyo Apple Watch Nhevedzano 1. Chidzitiro chakabatanidzwa nemuviri weApple Watch uye nekudaro haigone kutsiviwa nemunhu. Zvisinei, tinoziva izvozvo Kune vanhu vazhinji vane zvishandiso zvinodiwa uye vanogona kubvisa iyo yakakuvadzwa skrini kuitira kuti vaise iyo nyowani.
Kuti ndikupe zano, iyo nyowani NON-ORIGINAL skrini yeApple eWatch nhevedzano 1 ine mutengo wekutengesa pane network iyo inotangira kubva pa79,45 euros kusvika ku87,48 euros zvichienderana nekuti iyo skrini ndeyeMitambo modhi here kana kwete uye kana iri iyo 38mm kana 42mm muviri. Kana iwe uchida kuona zvakawanda nezve izvo zvandakuudza, unogona kushanyira iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Spare zvikamu zveApple Watch mumusika weChina
Teamviewer basa rekuongorora uye kupa
Iwe uchaita zvaunogona here kuti uwane yako HomePod muna Zvita?